शिक्षा | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
१th औं शताब्दीको अन्त्यमा सामाजिक र राजनीतिक जीवन
प्रकाशित 21.08.2021 21.08.2021
यस लेखमा, हामी संक्षिप्त १ 18 औं शताब्दी मा जीवन को वर्णन गर्नेछौं। रूस, बेलारुस र लिथुआनिया, आफ्नो सम्बन्ध र राजनीतिक पृष्ठभूमि मा।
विदेशी भाषामा संचार
प्रकाशित 29.07.2021 29.07.2021
सबै मानिसहरु धेरै मिलनसार छन्, तर के हुन्छ यदि तपाइँ न केवल यात्रा को लागी एक भाषा को जरूरत छ, तर काम को लागी पनि? भाषा सिक्ने आधारभूत सिद्धान्तहरु पत्ता लगाऔं।
यूफो रहस्य - थर्मल विजय
प्रकाशित 28.07.2021 28.07.2021
अन्तरिक्षको बारेमा रोचक लेख, सोभियत खगोलविज्ञानविद्, जसले तिनीहरूलाई ब्रह्माण्डको अन्वेषणमा गहिरो अध्ययन गर्न अनुमति दिए!
बदमाशी कसरी सुरु हुन्छ र परिस्थितिबाट कसरी बच्न सकिन्छ?
प्रकाशित 26.07.2021 26.07.2021
धेरैले विद्यालयमा धम्कीको अनुभव गरेका छन्, तर के हुन्छ जब भीडभाड पहिले नै काममा हुन्छ? कसरी व्यवहार गर्ने र द्वन्द्व परिस्थितिहरु बाट बाहिर निस्कने।
स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको के हो?
प्रकाशित 01.02.2021 01.02.2021
स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको के हो? मसँग कुनै शंका छैन कि धेरैले यो प्रश्न सोधेका छन्। यस्तो लाग्दछ कि बच्चालाई यो प्रश्नको उत्तर दिन गाह्रो हुँदैन। जे होस्, के तपाई छिटो र छोटो जवाफ दिन सक्नुहुन्छ?
वृषभ र मीन अनुकूलता: संघ विशेषता
प्रकाशित 15.09.2019 02.10.2019
पुरानो भाग्य भनेको बच्चाको लि on्गमा बताउने - अनुष्ठान वा सत्य पत्ता लगाउने तरीका?
अनौंठो सपनाको व्याख्या: तपाईं किन स्मारकको सपना देख्नुहुन्छ?
नोवोचेर्स्ककको एसेन्सन क्याथेड्रल: ईतिहास। सेवा तालिका
शहरहरूको कार्य प्रकार्यद्वारा शहरहरूको वर्गीकरण: उदाहरणहरू
यो शहर आफैमा उत्पन्न हुँदैन। यसको जन्मको क्षणदेखि यो कुनै प्रकारको गतिविधिसँग जोडिएको छ जुन यसको फंक्शन हो। विगतका तथ्यहरू मानिसजातिको शताब्दीयौं पुरानो इतिहासले यसको गवाही दिन्छ ...
अर्थोडक्स चर्चमा चर्च भाँडाकुँडाहरू
प्रकाशित 15.09.2019 04.10.2019
Socionics हो ... Socionics: सम्बन्धहरूको तालिका
धेरै लामो समयको लागि, सोशोनिक्सको रूपमा त्यस्तो शब्द थियो। यो विज्ञान होईन, तर व्यक्तित्व प्रकारहरूको विशेष वर्गीकरण हो, साथै उनीहरू बीचको सम्बन्धहरू पनि। यो पछिल्लो शताब्दी को सत्तर को दशक मा स्थापना भएको थियो ...
बच्चाहरूले कति उमेरमा ऊर्जा पिउन सक्छन्?
प्रकाशित 15.09.2019 20.09.2019
विकसित देशहरूमा कानूनी पेसको बिक्री प्रतिबन्धित गर्न कानून बमोजिम रूसले युवाहरूको स्वास्थ्यको पनि ध्यान दियो। सामान्य कार्यहरूले तपाइँको उर्जा पेयहरू कति पिउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको स्थापना गर्दछ। यस्तो निर्णयको लागि आवश्यकता सम्बन्धित छ ...
२००२ - कुन जनावर? पूर्वी राशिफल
न्यायिक शाखा: कार्य र अवधारणा। रूसी संघ मा न्यायिक अधिकारीहरु को कार्यहरु
राज्य जहिले पनि एक विशिष्ट संरचना थियो, जसको मुख्य तत्व जनसंख्या थियो। जे होस्, यति ठूलो भीडका लागि निरन्तर सुपरिवेक्षण चाहिन्छ। अन्यथा, तिनीहरूको गतिविधिहरू केवल नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छ ...
मेष र मकर: अनुकूलता साइन गर्नुहोस्
राज्य परिषदको स्थापना
राज्य परिषदको स्थापना, रूसी साम्राज्यको पहिलो सर्वोच्च विधायी निकाय, १ 1810१० मा भएको थियो। उनले सम्राटले अनुमोदन गर्नु भन्दा पहिले मन्त्रीहरूले पेश गरेको विधेयकलाई विचार गरे। राज्य डुमा को निर्माण, जस्तै ...
सरल शब्दहरूमा व्यक्तिगत डेटा को भण्डारण मा कानून। रूसमा व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा
व्यक्तिगत डाटा एक विशेष व्यक्ति को बारे मा जानकारी हो। प्रयोगकर्ताहरूले यो सूचना बिभिन्न इन्टरनेट सर्भरमा प्रत्येक दिन प्रविष्ट गर्छन्। २०१ 2015 मा, व्यक्तिगत डेटा को भण्डारण मा एक कानून मा हस्ताक्षर गरियो। यस अनुसार ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ १०,२2 अर्को पाना
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 2,200 प्रश्नहरू।